UCanzibe 24, 2018 by okwenyaniWW, Iimbono zizonke:
Yintoni iRealtyWW Info eyenzayo ukuba ihambelane ne-GDPR? Ngomgaqo wokugcina woKhuseleko lweDatha Jikelele (GDPR) umhla wokugqibela wokuthobela, sifuna ukukunika uhlaziyo ukuze uqiniseke ukuba silungiselelwe uMeyi 25th, 2018. Sisiqalo sexesha elitsha lokucaca kwaye sikusibekele.
okwenyaniWW Ngamana 24, 2018
Olu ngeno yafakwa kwi Umthetho wepropathi. Bookmark le Permalink.
Julayi 27, 2018 Izizathu ze-5 Kutheni kufanelekile ukuFundiswa kwePropathi Ukuthengiswa kwezindlu kuye kweshishini elikhulu elibandakanya imithetho emininzi ekufuneka ilandelwe. Ijongana nemicimbi ebanzi enje ngeengxabano zemida, ubunini kunye nokungahambelani kuthengiselwano, ukuthenga, ukuthengisa iipropathi kunye nokunye okuninzi kufakiwe. Ngokwesiqhelo kugxile ekuthengweni nasekuthengiseni, nakwiimpikiswano phakathi kwabaxhasi kunye nabahlali. Kungenxa yokuba ngamanye amaxesha, umthetho wembambano wenzeka phakathi kwala maqela mabini. Esi sityholo sibizwa ngokuba sisimangalo. Uninzi lwamaxesha, ungquzulwano […] exhonyiweyo Umthetho wepropathi
Oktobha 26, 2016 Iingcinga malunga neempembelelo zeBrexit kwiRent yerente yase-UK kunye nexabiso lezindlu Amaxabiso entengiso yexabiso lentengiso achaphazeleka kakhulu xa urhulumente welizwe ephelisa ubudlelwane bakhe namaqela ehlabathi. I-European Union yenye yeemanyano zomanyano kwezopolitiko nezoqoqosho kwihlabathi elibuyela ekuqaleni kukaNovemba 1, 1993. Ifumene ilahleko enkulu, xa i-52% ye-United Kingdom ivote ukuba imke njenge-48%. Kodwa zeziphi izithintelo ezibonakalayo ezilindele i-UK? Kwelinye, i-sterling yayo yehle kwi-31 yeminyaka ubudala ngokuchasene ne-US buck. Yayo […] exhonyiweyo Imali yezezindlu
Ngamana 21, 2016 Zithini na iziphumo zeNtlawulo ye-DUI Kwipropathi ye-Federal okanye kwi-Federal Jurisdiction? Zithini iziphumo zentlawulo ye-DUI kwipropathi yomdibaniselwano okanye kulawulo lobumbano? Ukubekwa ityala lokuqhuba phantsi kwempembelelo lityala elinzima kakhulu, nangona kunjalo, ukuba uhlawuliswa i-DUI ngezizathu zomanyano, oku kuya kuba mandundu ngakumbi. Iziseko zenkundla ezinje ngeziseko zomkhosi, izakhiwo zikarhulumente, izakhiwo zezikhululo zeenqwelo moya, iipaka zomdibaniso kunye nenye indawo eye yaphantsi komgaqo wobumbano zizezona ndawo zonke zibonisa ukuba umrhumo we-DUI ubekwe kwi-Federal DUI […] exhonyiweyo Umthetho wepropathi
Novemba 26, 2016 Izizathu kunye nokubaluleka kokuba ne-Inshurensi yesihloko I-inshurensi inika ukhuselo kwaye nendlu ekhuselayo kufuneka ikhuselwe ngokufanayo. Indlu yakho isenokuba itshintshe izandla ezininzi kule minyaka idlulileyo, akukhathalekile ukuba iyinto entsha okanye indala. Ukuqinisekisa ukuba amaxwebhu ebengachaphazelekanga nangayiphi na indlela kufuneka ujonge i-inshurensi yesihloko ukugcina zonke iingxaki. Unokuzazi ezinye zeengxaki eziqhelekileyo ezinxulumene nesihloko sepropathi efana neempazamo ekungeneni kwengxelo kwiirejista, umda […] exhonyiweyo Umthetho wepropathi
Matshi 14, 2018 Abanini bemihlaba kunye nokulimala kwabo Bahlali Ukuba ngumnini mali kuthengiswa izindlu nomhlaba kungayinto entle kuye nakubani na yokufumana imali kunye nokwakha ubutyebi bexesha elide. Ngelixa izindlu nomhlaba zinokuba ngumthombo omkhulu kunye nenciphiso yengeniso, kukho umsebenzi kunye nomngcipheko obandakanyekayo kunye nawo. Umngcipheko omnye uthathwa ngabanini bomhlaba ngumngcipheko wokuba abaqeshi okanye iindwendwe zabo baqeshe ukulimala ngelixa besepropathi yomnini-ndawo. Xa kufikwa kumba wokulimala kwabaqeshi, abantu abaninzi badidekile malunga nokuba yintoni ityala […] exhonyiweyo Umthetho wepropathi
Julayi 31, 2019 Kutheni le nto abantu beyifuna inkonzo yegqwetha elichule? Kwihlabathi lanamhlanje, akunandaba nokuba loluphi uhlobo lwamatyala obandakanyeka kuwo ukuba uqasha umntu oqeqeshiweyo ukuba asingathe yonke imicimbi yezomthetho, kwaye ke oko kukunceda ukuba uphume kuzo zonke iingxaki okanye uphile ngentlonelo eluntwini. Xa uqasha iingcali kunye nomntu onamava okujongana netyala lakho, ke amathuba okuphumelela ayenyuka kwaye angqine zonke izinto ezilungileyo kuwe. Nguye kuphela umntu okuqondayo kwaye uthembisa ngokukunceda. Kulomntu, […] exhonyiweyo Umthetho wepropathi
Matshi 2, 2018 Amabango okwenzakala ngobuqu? Ngaba i-Inshurensi yoMnini-ndlu yam uyayigcina? Kwiimeko ezininzi ipolisi yeinshurensi yomnini mzi iya kugubungela ukonzakala komntu. Kodwa ayisiyiyo yonke into egutyungelwe yi-inshurensi yomnini khaya kwaye ziya kubakho iimeko ngokungafakwanga. Imeko #1 iChad inabahlobo abathile ngaphezulu konwabe. Omnye wabahlobo bakhe uza nomnye umhlobo, owenzakalayo impahla yakhe. Emva koko ufaka ibango. Uxanduva lokubonakaliswa koxanduva lokuhlawula kuba kuthathwa njengelahleko okanye ulwaphulo-mthetho lomntu wesithathu. Ukugubungela "uxanduva lobuqu" kumgaqo-nkqubo womnini-mzi wakho uya […] exhonyiweyo Umthetho wepropathi
Aprili 3, 2019 Ukulawulwa kwezitshabalalisi yinkqubo elula kule mihla ngokuziqhelanisa nokuphucula Ukuhlolwa kwesakhiwo luvavanyo lokujonga isakhiwo kunye nesakhiwo esakhiweyo okanye esakhiwayo siyahlangana nemigaqo yolwakhiwo kunye neekhowudi. Kuyimfuneko ukuba isakhiwo sihlangabezane nale migaqo, ke ngoko akukho ziphikiso malunga nokwakha ezi zakhiwo kunye nolwakhiwo. Ngelixa sisakha isakhiwo okanye isakhiwo, zininzi izinto ekufuneka ziqwalaselwe, kwaye zininzi iindidi zohlolo ekufuneka zenziwe ukusuka kuhlolo lwamanzi ukuya kuhlolo lwemisebenzi yoluntu. Nantsi lapho […] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya
Novemba 15, 2016 Izinto ezibalulekileyo ekufuneka uziqwalasele xa ukhetha i-inshurensi Ukuqinisekisa ukhuseleko lwethu kuthathwa njengezinto ezisisiseko zekhaya eliqhelekileyo. Oku kuthetha ukuba nohlobo lwesicwangciso sokugcina xa imeko yenzekile kwaye ngoku awunayo imali yokuhlawula isibhedlele. Ngokukubhalisa wena kunye nosapho lwakho kwinkonzo yeinshurensi ethembekileyo yasePhilippines, unokuqiniseka ukuba zonke iimfuno zonyango ziya kunyanyekelwa. Nangona kunjalo, kubalulekile nokuba uqaphele ukuba ayizizo zonke iinkampani ezenziwa ngokulingana. Kukho amaziko […] exhonyiweyo Umthetho wepropathi